Dowladda Itoobiya oo sheegtay in Ciidankeenu dib u qabsan karaan Tigreega | Berberanews.com
Home WARARKA Dowladda Itoobiya oo sheegtay in Ciidankeenu dib u qabsan karaan Tigreega
Dowladda Itoobiya oo sheegtay in Ciidankeenu dib u qabsan karaan Tigreega
Itoobiya ayaa ka hadashey markii uggu horeysay oo ay mucaaradka TPLF dagaal yahanadooda qabsadeen xarunta gobolka Tigray ee Mekelle.
Dowladda ayaa sheegtay in sababtii ay uggala soo baxdey gobolka Tigreega ciidamadeeda ay tahay arrin siyaasadeed, laakiin aaney aheyn mid military, sida uu sheegay wasiir kuxigeenka arrimaha dibadda Itoobiya, Redwan Hussien.
Wuxuu intaa ku darey wasiirku in haddii ciidamada federaalka Itoobiya dib looggu amro iney halkaasi qabsadaan, iney ku qabsan karaan toddobaadyo gudahood, sidii kal horaba ay ugga qabsadeen TPLF bishii November ee sanadkii tagey ee 2020-ka, kuwaasoo ka xoog badnaa kana abaabul wanaagsanaa, sida ay haatan yihiin.
TPLF ayaa sheegtay maalmihii lasoo dhaafey in gobolka Tigray ay ku qabsatey awood military, oo ay ku muquuniyeen kuwii halkaa kusugnaa.
Dalkan ayaa dagaalka ka socda gobolka Tigray wuxuu uggu kacey dhaqaalo gaaraya laba bilyan oo Doolar sideedii bilood ee ina dhaaftey, inteeda badan waxey ku bixiyeen dhanka gargaarka, waa sida ay dowladdu sheegtaye.
Redwan ayaa intaa raaciyey in 70% gargaarka bani’aadanimo ee la geeyey gobolka Tigray ay bixisay dowladda federaalka Itoobiya, iyadoo u tureysa shacabka dagaalka halkaasi ku qabsadey.
Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyey in sheegashada dowladda ee ah in dagaalkii Tigray uu dhamaadey bishii November ee ina dhaaftey, inkastoo halkaasi ay ka wadeen dagaal ku dhufoo ka dhaqaaqa mucaaradka Tigray, taasoo uu ku eedeeyey wasiirku iney shacabka ka dhiganayeen gabaad.
Previous articleEthiopia hopes Somaliland port terminal reduces dependence on Djibouti
Next articleSomaliland oo uga digtay Puntland inay ku soo xadgudubto Gobolka Sool